Action Bank | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Action Bank | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Barcrest si Action Bank oghere bụ ihe zuru ezu na-emeso ndị, ndị na-achọ àgwà ndịna na ịrịba bonus atụmatụ na a 5×3 ukwu oghere egwuregwu na 20 betlines. Action Bank oghere na-ama n'ihi na ya agadi-akwụkwọ ochie isiokwu na-akpali mmasị na akara. Ị pụrụ ịhụ a ụlọ akụ uko eji na backdrop. Ọ bụ uko i kwesịrị ịkwụsị na-emeri ndị mega jackpot. Bụ na-akpali?
Graphics na akara:
All otuto nke na-eme Action Bank na-ewu ewu n'etiti video oghere Player na-aga ndịna-emeputa nke a egwuregwu. Ị fọrọ nke nta ka aga azụ na oge na-ahụ ihe ochie gaferela oghere igwe. Barcrest gbalịrị ngwakọta ochie ịke isiokwu na oge a video oghere atụmatụ ike a zuru okè oghere egwuregwu na ya ihe ịga nke ọma. Isi akara na egwuregwu a na-obe, noughts, big red 7, Baa, Joker na Golden volt. The joker-arụ dị ka a ọhịa na Golden volt bụ ikposa akara.
Dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ oghere egwuregwu na ikposa akara bụ chọọ mkpa ka ị egbe maka, ma ọ bụrụ na ị chọrọ irite free spins. N'agbanyeghị, ịkpata free spins na Action Bank Casino Ohere mepere is quite different from other mobile slots. Mbụ i nwere ala ise chụsasịa n'ebe ọ bụla ịtụ ogho wiil wee game ajụ gị na-emeghe ọ bụla ọlaedo uko. Ị ga-esi na ọnụ ọgụgụ nke free spins i akwụ site na imeghe uko.
The nnukwu red 7 bụ ndị kasị elu jiri kpọrọ akara na egwuregwu a. Ọdịda atọ ma ọ bụ karịa 7s pụrụ inyere gị aka na-emeri a nnukwu agbata n'ọsọ egwuregwu a. Ị nwere ike ịmepụta ọzọ akwụghachi ụgwọ n'ịgwa site ọdịda 7s na wilds. N'otu aka ahụ, i nweta ihe prizes mgbe ị na adaa elu uru na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya ya na ndị wilds.
E nwere anya na egwuregwu a n'ihi na ị. Ị pụrụ iche na noughts bụ na-abaghị uru na akara, ma ha nwere ike ghọọ ọlaedo vaults na-enye gị ihe elele karịa ị na-atụ anya mgbe ọ bụla atụ ogho.
The Big Bank Gburugburu:
-Akpọ Big Bank Now na Action Bank kwere omume ma ọ bụrụ na ị na- 25 free spins. Ọ bụ a buru gburugburu na nke gị mkpa iji bulie atọ ndị yiri akara na egwuregwu ụgwọ ọrụ ị na 500x nke ngụkọta staked ego.
Na ihe RTP nke 95.16%, egwuregwu a bụ otu na-atụ anya. The nnukwu ụlọ akụ ego bụ isi ihe pụta ìhè nke egwuregwu na bụ a obi ụtọ ọpụpụ si emebu atụmatụ. Na nzọ opekempe dị ka ala dị 20p Player enweghị ọtụtụ ida. A ga na-agbalị ihe niile na-classic isiokwu ndị hụrụ!
Bar Bar Nwa 5 ukwu